Warbaahinta Bulshadu ma ku khasbaysaa Suuqleyda in ay ka durugsan yihiin Warbaahinta baahsan? | Martech Zone
Khamiista, Febraayo 16, 2017 Douglas Karr
Tani waa sheeko qurux badan oo tilmaamaysa Sprout Social oo leh cawaaqib xumo qoto dheer marka loo eego kuwa suuqleyda ah oo diyaar u ah inay aqbalaan. Infographic waxaa loo yaqaan 6 Isbeddellada Warbaahinta Bulshada ee la wareegaya 2017 waxayna ku dhex socotaa marin kasta oo warbaahinta bulshada ah, sida dabeecadaha macaamilku isu beddelayaan, iyo horumarka tikniyoolajiyadda sida sirdoonka macmalka ah.
Isku darista fiidiyowga dalbashada, tiknoolajiyada xayiraadda xayeysiinta, iyo koritaanka 1: 1 kanaalka sida Snapchat iyo suuqleyda ayaa u baahan inay dib uga fiirsadaan dufcadooda iyo xayeysiinta qarxa ee ku howlan sannad kasta. Iibsaduhu wuxuu awood u leeyahay hadda inuu helo waxa ay u baahan yihiin, goorta ay u baahan yihiin, halka ay uga baahan yihiin, qiime ay ku doonayaan. Fursadaha cidhiidhiga ee shirkaduhu waxay tilmaamayaan inay maal-gashadaan khibradooda macaamiishooda iyo inay xidhiidh toos ah u yeeshaan.
Xitaa cilaaqaadka ganacsi-ganacsi, suuq geynta xisaabaadka natiijooyinka wadista. In kasta oo xayeysiinta ballaaran aysan dhiman, haddana waxaa la bartilmaameedsaday, istiraatiijiyad shaqsiyadeed oo bilaabay inay wadaan safarka macaamiisha - maahan xayeysiiska lagu dhajiyay meel kasta oo aysan fiirinayn.
Isbeddellada Warbaahinta Bulshada 2017
AI Lenses loogu talagalay Facebook iyo Instagram - u ekaansho qaar ka mid ah waayo-aragnimo muuqaal ah oo saadaalin ah waxaa laga yaabaa inuu ku jiro jidka gaaban ee Facebook, laakiin ma hubo in eeyaha AI la sii deyn doono xilligan safarkayaga warbaahinta bulshada. Waxaan ka shakisanahay in adeegsiga ugu horreeya uu noqon doono mid u dhigma xayeysiinta iyo dhadhanka muuqaalka.
Macaamiil badan oo Macaamiisha Macaamiisha ah - iyadoo baahida loo qabo xiriiro shakhsi ahaaneed iyo 1: 1 ay sii kordheyso, mahadsanid waxaa jira teknoolojiyad ka caawin doonta yareynta ilaha lagama maarmaanka u ah in lagu gaaro natiijooyin ka sarreeya. Chatbotyada waxaa loo isticmaali karaa in lagu bixiyo macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan qaab wadahadal ah oo aan damin macaamiisha ama ganacsiyada - dhammaantood iyada oo la kordhinayo sicirka beddelaadda iyo caawinta martida.
Waxyaabaha Lacag Bixintu Sii Wato Inay Xukumaan - Haddii ay jirto hal shay oo ay suuqyadu fahmeen ayaa ah in baraha bulshada ay kaabayaan buundo udhaxeysa wax soo saarkaaga iyo adeegyadaada iyo macaamiisha ama ganacsiyada aad rabto inaad hor dhigto. Maaddaama baraha bulshada ay sii kordhayaan, waxaad ogtahay in buundada ay qaali noqonayso!
Mudnaanta Astaamaha Ganacsiga & Falanqaynta - Ma hubo taas muuqaalada waa sax - Waxaan aaminsanahay in faa'iidooyinka, qiimaha, iyo waayo-aragnimadu ay yihiin halka ay baraha bulshadu u socdaan inay kaxeeyaan ka-qaybgalka, helitaanka, haynta, iyo kordhinta qiimaha xiriirka aan la leenahay macaamiisheenna. Falanqaynta ayaa lagama maarmaan u ah tan - laakiin waxaan doorbidi lahaa waayo-aragnimo fudud oo ku lug leh ka-darista waxyaabo badan oo aan micno lahayn.
Ka fogow otomaatiga - Waxaan sidoo kale yara shaki qabaa arrintan. Sannadka 2017, suuqleyda ayaa u baahan doona dhammaan otomaatigga ay maamuli karaan si ay u gaaraan natiijooyin ka sarreeya iyadoo ay ugu yar tahay ilaha dhaqaale. Si kastaba ha noqotee, waxaan ku doodi doonaa inay tahay inay noqoto qalab casri ah oo dhagaysta, qaybiya, shaqsiyeeya, isla markaana saadaaliya hawlgelinta xigta ee khadka tooska ah ee warbaahinta bulshada.
Dukaameysiga Bulshada & Iibsashada Degdega ah - Iyada oo ay weheliso awoodda si fudud loo iibsado, loogu deeqo, ama loo diro hadiyado, ka faa'iideysiga waxyaabaha ay soo saaraan isticmaaleyaashu waxay noqon doonaan isbeddel koraya. Waxaan wadaageynaa qoraal ku saabsan Stackla ugu dhakhsaha badan taasi waa wax la yaab leh, kordhinta heerarka beddelashada mararka qaarkood 30% alaabooyinka qaarkood.
Shaki yar ayaa ka jira kobaca iyo casriga casriga ah ee warbaahinta bulshada ay yeelan doonaan sanadka 2017. Inkasta oo ganacsiyada ay sii wadaan halganka - kaliya 34% ganacsiyada yar yar ayaa adeegsada warbaahinta bulshada si ay ula macaamilaan ulana hadlaan macaamiisha, ku dhowaad saddex meelood meel dhammaan macaamiisha ayaa sheegay in joogitaanka bulshada ee summaddu ay ahayd sababta ugu weyn ee loo tijaabiyo badeecooyinka ama adeegyada cusub. Iyo 57% macaamiisha ayaa u badan inay wax ka iibsadaan astaan ​​ay raacaan
Tags: Isbeddellada 2017infographicololeyaal bulsheedsoo socda bulshadaotomaatiga warbaahinta bulshadawarbaahinta bulshada ee infographicisbeddellada warbaahinta bulshadaisbedelka warbaahinta bulshada 2017joogitaanka bulshadaiibinta bulshadadukaameysiga bulshadabulsheedisbeddellada